MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYAHA EE BASSET RETRIEVER - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha ee Basset Retriever
Dahab dahab ah / eeyaha Basset Hound
'Ani waa eeygii ugu horreeyay ee aan abid leeyahay. Waxaan ka badbaadiyey hoygaygii maxalliga ahaa markay ku dhowaad 1. Hoygu wuxuu lahaa Ani oo ah 'eeyga la soo bandhigayo' taasoo la macno ah inay maalmaheedii xaddidnaayeen. Waxaa laga yaabaa inay ahayd fekerka eey kale oo aan helin fursad caddaalad ah adduunkan (taas oo ah mid naxariis darro ah), ama muuqaal 'u gaar ah' oo aniga igu soo jiitay iyada (taas oo ah sida aan ugu sifeyno dadka). Waxay hadda tahay 3 waxayna u kortay inay noqoto hal 'eey dheer.' Runtii waxay leedahay astaamaha Basset Hound (waxay jeceshahay hurdada, lugaha gaagaaban iyo dhagaha dhaadheer) iyo Golden Retriever (waxay la ciyaaraan kuwa ugu fiican). Waxaan helnay Ani walaal sanad ka hor, Jaxson, oo ah Basset Pointer mix, oo ay ku weyday jacaylkeeda. Ma weydiisan karay eey ka dabeecad wanaagsan iyada oo sifiican u ciyaareysa aadna u adeecsan. Waxay jeceshahay inay socod iyo / ama ku ciyaarto barxadda dambe, laakiin waxay ku soo kortay guri dabaq ah oo ay sifiican ula soo shaqeysay. Waxaan daawadaa Eyga Whisperer Markasta oo aan ka qabto TV-ga. Falsafada Cesar runtii way shaqeysaa. Xaaskeyga iyo aniga runti waxaan isku dayeeynaa inaan dulqaad badan yeelano kahor socodka iyo howlaha si Ani ay u degto oo ay ulaxirirto xasilloonida abaalmarin Waxaan sidoo kale ka shaqeyneynay inaan yeelano Ani gadaal naga soco , sida Cesar ku sameeyo ushiisa usha.
Basset Retriever ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Dahab dahab ah iyo Basset Hound . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda nooc isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% nadiif ah ilaa 50% saafi ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
Naadiga Isku-dhafan ee Canine-ka Mareykanka = Basset Retriever
Diiwaangeliyuhu Nooca Diiwaanka = Basset Vertier
Naqshadeeyaha Eeyaha Naqshadeynta Naadiga = Basset Retriever
Diiwaanka Canine-ka Caalamiga ah ee naqshadeeye®= Ka-Casire Basset
'Tani waa 7 jirkeyga Basset Retriever oo lagu magacaabo Huppie. Hooyadeed waa daahir Basset Hound aabaheedna waa daahir dahab celis ah. Markii aan helnay waxay ahayd cunug yar oo aynaan ka fileyn inay weynaan doonto markay weynaatay. Way jeceshahay socod socod oo qoyskeenuna jecel yahay (aadanaha iyo eeyaha si isku mid ah). Iyadu waa mid ka mid ah 6 eeyo aan leenahay waana tan ugu da'da weyn dhammaantood. '
'Tani waa Gracie, waa 1-sano jir Basset Retriever. Ninkayga iyo aniga waan korsanay markii ay 5 toddobaad jir ahayd waxaana naloo sheegay inay tahay Basset Beagle. Waan lahaa iyada DNA ayaa la baaray iyada oo loo marayo Wisdom Panel oo hadda la ogaaday inay iyadu tahay Basset Retriever! Aad bay u ciyaareysaa. Iyadu waa qof caqli badan oo si fudud u tababaran, haddii aad ka heli karto dareenkeeda. Dhibaatada kaliya ee aan kula soo kulanay iyada ayaa ah inay mararka qaarkood yaraato oo ay dhuuxdo markay yarayd. Tani waxay badanaa sabab u ahayd taarikada koritaankeeda oo si iskiis ah isu saxay oo aan daawano cunnadeeda maxaa yeelay culeyska dheeriga ah wuxuu sababayaa dhibaatooyinka inay mar kale soo baxaan. Iyadu waa eey qoys oo layaableh waxayna jeceshahay carruurta iyo qof kasta oo kale oo siin doona xoqin caloosha ah. Kaliya waan ku faraxsanahay inaan ogaanay waxa ay tahay iyo in ay jiraan kuwo iyada la mid ah!
'Kani waa Lilipop, Dahabkeyga Dahabka ah ee x Basset Hound eey 3 bilood jir ah.'
Zoey Basset Retriever (Basset Hound / Golden Retriever mix bre eye) markuu 8 bilood jiray— 'Hooyadeed waxay ahayd Dhajiye Dahab ah aabuhuna wuxuu ahaa Basset Hound.'
Zoey Retriever Basset (Basset Hound / Golden Retriever mix puppy) markuu 2 bilood jiro
'Maggie waa isku jir Basset / Dahab ah. Looma iibsan iyada oo ah nuuc naqshadeeye ah. Waa la badbaadiyey.
Maggie the Basset / Golden Retriever isku dar sida eey yar
'Kani waa Wally, eey Basset / Dahab ah oo 9 toddobaad jira. Hooyo waxay ahayd Basset aabahana wuxuu ahaa Dahab. Isagu waa qof aad u saaxiibtinimo badan, caqli badan oo la dhaqan leh qof kasta oo uu la kulmo (aadanaha, eeyaha, bisadaha iyo xitaa fardaha!) Wally waxaa loogu magac daray Wally Green Monster, mascot-ka Boston Red Sox. Si fudud, wuxuu umuuqdaa Basset leh dhogor dahab ah! '
'Tani waa Buckley, oo lagu muujiyey halkaan isagoo jira 4 bilood. Isagu waa isku-darka Dahablaha / Basset. Isagu waa saaxiibtinimo badan (dadka iyo eeyaha labadaba) wuuna jecel yahay inuu ciyaaro. Markii hore wuu dabacsanaa, laakiin maalin kasta wuu sii firfircoonaa! Wuxuu ruugaa alaabta guriga, taas oo aan isku dayeyno inaan joojino, laakiin isagu sifiican ayuu ula shaqeynayaa isaga tababarka guriga . Ma jecla inuu keligiis ahaado, laakiin wuxuu isku maaweeliyaa markuu joogo. '
'Rosie waa gabar 9-bilood jir ah oo Basset Retriever ah. Waxaan ka helnay liiska craigslist ka dib markii aan eegnay dhammaan goobaha kale ee korsashada ee aagga. Waxay ahayd 6 bilood jir gurina way jebisay, laakiin waligeen fursad uma helin inaan u aragno iyada oo ah ilma yar oo yar. Waqtigaas waxyar ayey ka weyneyd hooyadeed, waxayna haatan miisaankeedu gaarayaa 44 rodol. Waxaan ku noolahay aqal yar, waxaanan raadineynay eey doonaya inuu u cararo xeebta, ama a socod dheer ku wareegsan durdurka , laakiin ma aanan dooneyn eey weyn inuu la wareego guriga oo dhan. Nasiib wanaag waxaan helnay Rosie! Waxay leedahay ciyaarta aabaheed (Dahabka) waxayna jeceshahay inay soo qaadato kubbadda tennis maalinta oo dhan, mararka qaarkoodna heerka waxqabadka hooyadeed (Basset), oo kaliya waxay dooneysaa inay qorraxdu seexato galabtii oo dhan. Waxay jeceshahay waqtigeeda ciyaarta, haddii aadan dheg u dhiginna waxay ku dhici doontaa anqawyadaada iyada oo ay ku socoto saxaro maroodiga ah, waxayna ku laaban doontaa dhabarka iyada oo muujinaysa in ay rabto in caloosheeda la xoqo. Weli waa cunug, waxayna leedahay wax badan oo ku saabsan nolosha oo ay aragtay baaskiil markii ugu horreysay toddobaadyo ka hor, mana garaneynin waxa looga fikiro waxa la yaab leh. Tababbarku wuxuu ahaa caqabad waxay jabisay saddex xadhig iyo hal suunka, laakiin had iyo jeer way imaan doontaa iyadoo orodsanaysa oo fadhiisanaysa cookie. Waxaan rajeyneynaa inaan helno sanado badan oo farxad leh iyadoo Rosie ay cagaha nagu haynayso! '
Eeg tusaalooyin badan oo ah Basset Retriever
Basset Retriever Sawirada 1
chihuahua iyo adhijirro australiyaan ah oo isku dhafan
sawirada bulldogs-ka dhalaanka Mareykanka
siberian husky cas sanka qas qas
ingiriiska bulldog basset hound mix
sida badan muqisho collie xadka a yeelan karaan